Ntughari America - 1763 rue 1789
Akwụkwọ ndị American Revolution
Echiche nke ntụgharị uche nke American Revolution
Amụma Ntugharị America #1
Amụma Ntugharị America #2
Amụma Ntugharị America #3
Amụma Ntugharị America #4
Amụma Ntugharị America #5
Amụma Ntugharị America #6
Amụma Ntugharị America #7
American Revolution akwụkwọ
American Revolution edemede edemede
Eserese nke American Revolution
Ọkọ akụkọ banyere American Revolution
Ntughari mgbanwe nke American #1
Ntughari mgbanwe nke American #2
Ntughari mgbanwe nke American #3
Ntughari mgbanwe nke American #4
Ntughari mgbanwe nke American #5
Ntughari mgbanwe nke American #6
Ntughari mgbanwe nke American
Oge Mgbanwe Ọchịchị America
Isi okwu Ntughari America
Ntughari America onye bu onye
Wordsearch American Revolution - echiche
Wordsearch American Revolution - ihe omume
Wordsearch American Revolution - ndi mmadu
Nnyocha okwu American Revolution - ebe
Amụma American Revolution
The Ntughari America malitere na etiti 1760 dịka nnupu isi nke ndị ọchịchị Britain na-ebi n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụsọ North America. O kwusiri na 1789 site na okike nke mba ọhụrụ, nke usoro iwu edepụtara edepụtara na usoro ọchịchị ọhụrụ.
Ntughari America nwere mmetụta miri emi n’akụkọ ihe mere eme nke oge a. Ọ gbaghaara ma mebie ike nke ndị isi ala ndị Europe. O jiri ọchịchị nke na-arụ ọrụ dabere na ụkpụrụ nchekwa nke Republican, ọbụbụeze a ma ama yana nkewa.
Ntughari America gosiputara na nnughari nwere ike iga nke oma na ndi mmadu n’achi agha onwe ha. Uche ya na ihe omuma ya kpaliri ndi ochichi nke ndi France (1789) na ndi ozo mechara buru ndi ochichi na ndi nwere onwe ha. Nke kachasị dị mkpa, Mgbanwe Ọchịchị America mụrụ United States, mba nke ụkpụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ike akụ na ụba ya na ike agha kpụziri ma kọwaa ụwa nke oge a.
Akụkọ banyere Mgbanwe Ọchịchị America bụ otu n'ime mgbanwe ngwa ngwa na mmepe. Tupu 1760s, ndị 13 na-achị Amerika nwere ọtụtụ afọ nke ọganihu akụ na ụba na ezigbo mmekọrịta na Britain. Ọtụtụ ndị America weere onwe ha ka ndị Briten na-eguzosi ike n'ihe; ha nwere afọ ojuju ịbụ onye ndị eze Britain maara ihe ma nwee obi ọma karịa ndị ohu na vass nke ụfọdụ ọchịchị aka ike nke mba ọzọ. Na mgbanwe nwere ike ịmalite na ọha ndị America na-achị achị nwere ihe a na-agaghị echetụ n'echiche.
N’agbata etiti 1760, a nwalere dị ka ihe na-enweghị isi: nnwale na arụmụka banyere iwu gọọmentị na ụtụ isi nwalere nkwụsi ike a maka Britain. N'ime afọ iri, ndị ọrụ ugbo America na-eji akwa ma ọ bụ ọkpọ ọkpọ na-eji aka ha wee na-aga agha megide ndị agha Britain na Lexington, Massachusetts. Ka ọ na-erule etiti 1776, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị America tụlere njikọ nke Britain nwere nke ukwuu na-apụtachaghị mma nke na ha tozuru oke maka nnwere onwe. Nnwere onwe a wetara ihe ịma aka abụọ: agha megide Britain, ike agha ụwa kachasị, na mkpa maka usoro ọchịchị ọhụrụ. Imeri nsogbu ndị a bụ agba ikpeazụ nke mgbanwe nke Ọchịchị America.
Ebe nrụọrụ weebụ mgbanwe nke American Alfa History nwere ọtụtụ narị ụzọ mmalite na nke abụọ iji nyere gị aka ịghọta ihe omume na America n'etiti 1763 na 1789. Anyị peeji isiokwu, nke ndị nkuzi nwere ahụmahụ na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme dere, na-eweta nchịkọta dị nkenke nke ihe omume na okwu. Akwukwo ederede dika nghazi, okuko, profaịlụ nke akụkọ ndụ, maapụ echiche, ihe odide, akụkọ ihe mere eme na profaịlụ nke ndị ama ama ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme. Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwekwara ọtụtụ ọrụ dị n'ịntanetị dịka ntụgharị okwu na otutu nhọrọ nyocha, ebe ị nwere ike ịnwale ma tụgharịa nghọta gị banyere America na mgbanwe.
Ewezuga isi mmalite, ọdịnaya niile dị na weebụsaịtị a bụ © Alfa History 2015-19. Enwere ike ghara idetu ọdịnaya a, bipigharia ma o bu kesaa ya ozo n’enwetaghi ikike nke Akụkọ Alfa. Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji weebụsaịtị Alfa History na ọdịnaya, biko rụtụrụ aka na nke anyị Usoro ojiji.
1784 na gafere
Banyere saịtị a:
Ntughari America nwere akụkọ, isi mmalite na echiche banyere ihe ndị mere na America n'etiti 1763 na 1789. Emere saịtị a site na Alfa History ma nwee okwu 100,000 na ibe 200. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na anyị FAQ page or Usoro ojiji.